Antonio Conte iyo Zinedine Zidane ayaa siyaabo kala duwan uga tagay kooxaha Inter iyo… – Hagaag.com
Antonio Conte iyo Zinedine Zidane ayaa siyaabo kala duwan uga tagay kooxaha Inter iyo…
Posted on 27 Maajo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Antonio Conte ayaa ka hadlay markii ugu horeysay tan iyo markii uu ka baxay ama fasakhay qandaraaskiisa ee kooxda Inter Milan, kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee kubada cagta, waxaana uu u mahadceliyay ciyaartoyda, shaqaalaha taageerada iyo taageerayaasha dadaalka ay u galeen kooxda in loo caleemo saaro horyaalka isla markaana kooxda lagu soo celiyo meeshii ay u qalantay.
Conte ayaa ku hogaamiyay Inter horyaalkii ​​ugu horeeyay muddo 11 sano ah xilli ciyaareedkan, laakiin wuxuu kula heshiiyey maamulka kooxda Arbacadii inuu joojiyo qandaraaskiisa hal sano ka hor inta uusan dhamaan, iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu ka careysan yahay qorshaha kooxda ee ah inay dhinto qarashka isla markaana iibiso ciyaartoy dhaqaale darteed iyadoo Saamaynta cudurka “Covid-19” ay muuqato.
Conte ayaa ku soo qoray bartiisa Instagram-ka, “Muxuu ahaa safarkii labadi sano ee la soo dhaafay! Maalin kasta waxaan noqoneynaa kuwa xoogan oo aad u go’aan leh iyo dadaal badan, waxaana ku guuleysanay inaan ka gudubno celceliska awoodaha had iyo jeer ku hareeraysan kooxda.”
Ma jiraan wax cudurdaar ah, kaliya shaqada ayaan ka tagay, oo ay weheliso ixtiraam iyo waxbarasho. Waxaan ku guuleysanay inaan dib ula soo laabano horyaalka 11 sano ka dib, laakiin wax walba ka hor waxaan diyaarinay Inter, waxaan ku celinay Inter meeshii ay ku habooneyd oo u qalantay. ayuu ku daray.
“Waad ku mahadsan tihiin dhamaan intii suurto galisay waxan oo dhan! Ciyaartoyda, shaqaalaha taageerada, madaxweynaha, maareeyayaasha iyo dhamaan inta na caawisay ee na taageertay labadan sano,” ayuu yiri.
Conte ayaa sheegay in Inter ay ku guuleysatay “xilli aad u adag” sababo la xiriira faafida Covid-19 iyo inay marwalba dareemayeen taageerada iyo xamaasada taageerayaasha.
Inter ma aysan gaarin meel ka sareysa kaalinta afaraad 8 sano ka hor inta uusan Conte imaanin 2019, laakiin tababarihii hore ee Chelsea ayaa kooxda ku hogaamiyay kaalinta labaad xilli ciyaareedkoodii ugu horeeyay ka hor inta aan loo caleemo saarin horyaalnimada xilli ciyaareedka 2020-2021.
Si kastaba ha noqotee, hamiga 51 jirkaan si uu u horumariyo kooxdiisa ayaa ka hortimid xaalada dhaqaale ee kooxda, iyadoo Inter lagu soo waramayo inay dooneyso inay dhinto mushaharka inta udhaxeysa 15 ilaa 20% ayna ku guuleysato 70 ilaa 100 milyan euro oo ah iibinta ciyaartoyda ka hor inta aan la gaarin xilli ciyaareedka soo socda.
Dhinaca kale tababarihii kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka tagay kooxda uu macalimka u ahaa, taasi oo aheyd wax la filayey, maadaama kooxda ay xilli ciyaareedkan doorkoodii dhinaca qaadista koobabka lagu hungoobay, sidaa darteed wajigiisa ayuu dhiikhada ka ilaashaday, intii la burin lahaa.